Blogger Gathering is Successfully Finished | The World of Pinkgold
ဖိုးသူတော် on August 29, 2009 at 11:52 am said:
Good… Go on ! Great !.. .We Blog We Go !
ဇောင်း on August 29, 2009 at 12:11 pm said:
We Blog We Happy 😉
သားဖြိုး on August 29, 2009 at 12:48 pm said:
တကယ်ကို လှပါပေ့… ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး ဘလော့ဒ်ဒေးမှာ အင်ဘား လေးငါးခြောက်ရာလောက် တက်ခဲ့တာကို မမီပေမယ့်… အရင်တစ်နှစ် အားငယ်စွာ စောင့်ခဲ့ရတာကို ဒီတစ်ကြိမ် အရမ်းကို ကျေနပ် အားရပါတယ်။ အရေအတွက်နဲ့ ယှဉ်ရင် ဘာမှ မပြောပ မနှိုင်းသာပေမယ့် ဒီလို တွေ့ဆုံပွဲလေး ဖြစ်မြောက် အောင်မြင်သွားတာကို ကျွန်တော်တစ်ယောက် အပါအ၀င်မို့ အရမ်းကို ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်…
lynnnay on August 29, 2009 at 1:36 pm said:
ကေဂျွန် on August 29, 2009 at 1:59 pm said:
Pingback: Blogger Gatehring in Myanmar | All Together on A Planet ...
ချစ်သူမောင် on August 30, 2009 at 9:00 am said:
အိုကေဗျာ ပင့်ကူတို့ကသွက်ပါ့ဥဥ ခုမှဝင်ဖြစ်တာ
Soe Win on August 31, 2009 at 7:10 am said:
လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့လူမှုရေးပွဲကလေးတွေပါ။ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မသင်္ကာလို့ စောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကတော့ သေချာပေါက်ရှိမှာပါ။ ရှိလဲ ဂရုစိုက်စရာတော့ မလိုပါဘူး။ ဘလော့ဂါတွေပဲလေ။
Mg Ogga on August 31, 2009 at 1:03 pm said:
မိုက်တယ်ကွာ အဲဒီနေ့ကတော်တော်ပျော်ဖို.ကောင်းတယ်နော် မပင့်ကူရေ
Mr.Pooh on September 1, 2009 at 5:07 pm said:
ဘလော့ဂါဒေး ကျင်းပခဲ့တာလေး ဖတ်ပြီး အဝေးကနေ ငါတို့ကြည်နူးမိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် မပါဝင်နိုင်ပေမယ့် ရှိနေတဲ့ လူဟောင်းလူသစ်တွေ ညီညီညွှတ်ညွတ် ရှေ့ဆက်နေနိုင်တာကို တကယ်ပဲ ဝမ်းသာပါတယ်။ အစစ အရာအရာ အောင်မြင်ပါစေ …
အလွမ်းပြေ on September 2, 2009 at 5:18 am said:
ချစ်ရေ..လာသွားတယ်။ ဒုံပတ်တွေလည်း ထပ်ကြည့်သွားတယ်။ ပျော်စရာကြီးဟာ..နင်ပျော်ခဲ့ကတယ်ဟုတ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ သူငယ်ချင်းရေ..
littlebrook on September 2, 2009 at 5:45 am said:
ဝေး မပင့်ဂိုးလ် .. အဲ့နေ့ကမရောက်လိုက်တာတော့ နာတယ်ဗျ .. စီဘောက်မှာအော်မရလို့ ဒီလာအော်လိုက်တာ …း(
cuttiepinkgold on September 2, 2009 at 6:01 am said:
ဟုတ်တယ် စိုင်းသူရရေ.. စီဘောက်မှာ အဆဲခံရလို့ ပိတ်ထားတာ
ဂျူဝသန် on September 4, 2009 at 9:20 am said:
ဟိုပုံလေးလည်း ထည့်နော်…. တို့တွေ ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေ။
အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင် သိချင်ကြတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေ ပြောမပြတော့ဘူး….။
လေပြေ on September 5, 2009 at 8:33 am said:
yamin on October 14, 2009 at 10:17 am said:
I remember to pyi.